Ny fepetra momba ny fahaizana miteny anglisy na ny mpianatra mianatra ny teny anglisy dia kendrena hamolavola na hahakingana ny fahaizana miteny anglisy ao anatin&#39;ny enin-taona. Ny fitomboan&#39;ny Percentile an&#39;ny mpianatra (SGPs) dia ampiasaina hamaritana raha toa ka manao fivoarana ampy isan-taona ny mpianatra hahatratrarana ireo tanjona ireo. Ny SGP dia mamaritra ny fianarinan&#39;ny mpianatra iray raha oharina amin&#39;ireo mpianatra hafa mizara ny tantaram-piainana mitovy amin&#39;ilay mpianatra, na ireo &#39;namana ara-pianarana&#39; ho an&#39;ny mpianatra. Ny fahaizan&#39;ny teny anglisy dia refesina mifototra amin&#39;ny fampisehoana sy ny fitomboan&#39;ny fanombanana WIDA ACCESS 2.0. Ny mpianatra ihany no fantatra fa mpianatra anglisy izay mandany ny ankamaroan&#39;ny taom-pianarana voasoratra ao an-tsekoly no tafiditra ao amin&#39;ny tatitra ny fahaiza-manao sy ny fitomboana. (Loharanom-baovao: taom-pianarana 2018-2019)
Ahoana ny fampitana ireo mpianatra anglisy amin&#39;ity orinasa ity raha oharina amin&#39;ny tanjona lavitry ny fanjakana amin&#39;ny fampandrosoana ny fiteny ny mpianatra anglisy?
Ny kendrena interim dia manondro fivoarana ilaina amin&#39;ny fanatrarana ny tanjona lavitry ny fanjakana ho an&#39;ny mpianatra anglisy.
Tsy misy soatoavina amin&#39;ity fisafidianana ity
Tombontsoa amin&#39;ireo mpianatra anglisy ao amin&#39;ny orinasa no manatanteraka isaky ny ambaratonga fahaiza-manao?
Ny haavon&#39;ny “Fandrindrana” sy ny “Fampitana” dia mampiseho ny fahaizan&#39;ny fahaizana miteny anglisy.
Haavony 1 = fidirana
Level 2 = fiandohana
Haavon&#39;ny 3 = Fampivoarana
Haavon&#39;ny 4 = mitombo
Haavon&#39;ny 5 = fanamoriana
Haavon&#39;ny 6 = Fanatonana
Haavo fahaizana anglisy